Lumbini Online | » बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति तयार बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति तयार – Lumbini Online
बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति तयार
काठमाडाैं, असाेज २७ । एकिकृत नेकपा माओवादीबाट हालै अलग्गिएका नेता डा. बाबुराम भट्टरार्ईले नयाँ पार्टी गठनको रुपरेखा लगभग पुरा गरेका छन् राजनीतिक पार्टीबाट देश विकास नहुने भन्दै भट्टराइले लामो समयदेखि नयाँ शक्तिको वकालत गर्दै आएका थिए । अहिले उनले भन्दै आएको नयाँ शक्ति निर्माणको संरचना तयार गरेका छन् ।उनले नयाँ पार्टी गठन गर्दा धेरै भन्दा धेरै युवाहरुलाई समेट्ने गरी तयारी गरेका छन् । यसका लागि पछिल्लो समय उनले आफू निकटका नेता तथा कार्यकर्तासँगको गोप्य भेटघाटलाई तीब्र बनाएका छन् ।
भट्टराई निकट स्रोतका अनुसार एकिकृत नेकपा माओवादीमा रहेका भट्टराई निकट २९ जना केन्द्रीय सदस्य मध्ये अधिकांश नेता नयाँ पार्टीमा आउने मनस्थितिमा छन् ।
यसरी आउनेमा देवेन्द्र पौडेल, गंगा श्रेष्ठ, टोपबहादुर रायमाझी लगायत नेताहरु छन् ।
एमाओवादी भित्रका कुन कुन नेतालाई कुन कुन तहमा समेट्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि धेरैजसो नेतासँग हप्ता २ पटक भेट्ने गरेको स्रोतले बतायो ।
टोपबहादुरलाई खुशी पार्न प्रचण्डले मन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन् । तर, टोपबहादुर भने मन्त्री पनि खाने र प्रचण्डसँग पनि नरहने तयारीमा रहेको भट्टराई निकट स्रोतले बतायो ।
बाबुरामको पार्टीमा देवेन्द्र पाैडेल, नवराज सुवेदी, रामचन्द्र झा, खगराज भट्ट, देवी खडका, कृष्ण शर्मा, महेन्द्र पासवान, कुमार पोडेल, खिमलाल देवकोटालगायतका नेताहरुलाई विभिन्न जिम्मेवारीमा दिने योजना भट्टराईले बनाएका छन् । यसैगगरी, मधेशमा बाबुरामका खम्बा मानिने प्रभु शाह, रामरिझन यादव पनि बाबुरामको पार्टीमा रहनेछन् । उनकी पत्नी हिसिला यमी, लिला भण्डारी, देवेन्द्र पराजुली कल्पना धमला, देवराज रेग्मी, हेमराज भण्डारीजस्ता बाबुरामका स्थायी कोटेरीका नेताहरु बाबुरामको नयाँ शक्तिको बलियो आधार बन्ने बताइएको छ ।
गत मंगलबार मात्रै भट्टरार्ईले काठमाडौंको एक बैङक्वेटमा आफू निकट कार्यकर्ताहरुसँग गोप्य भेला गरेका थिए । भेलाले अबको एक महिनापछि नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ । यस्ता भेला तथा बैठकहरुमा नेता तथा बैठकहरुमा कार्यकर्ताहरुले भट्टरार्ईलाई नयाँ पार्टी गठन छिटो गर्न दवाव दिन थालेका छन् ।
त्यसो त, अब गठन हुने नयाँ पार्टी माओवादी नभएर माक्र्सवादी दर्शनमा आधारित हुने भट्टरार्ईले यसअघि नै बताइसकेका छन् । भट्टरार्ईको यस्तो भनाइकै कारण पनि माओवादी पार्टी मात्रै नभएर माओवादी इतरका युवाहरुलाई पनि समेट्ने भट्टरार्ईको योजना रहेको बताइएको छ ।
‘उहाँले धेरै जसो युवाहरुलाई नै भेट्दै आउनुभएको छ । एमाओवादीमै रहेका पनि बृद्ध उमेरका नेतालाई भन्दा युवालाई आकर्षित गर्ने उहाँको तयारी छ’ भट्टरार्ई निकट एक नेताले भने, ‘तर माओवादी फुट्यो भन्ने सन्देश नफैलियोस् भन्नेमा उहाँ सचेत हुनुहुन्छ । सकेसम्म नयाँ पार्टी गठन गर्ने भन्ने नै उहाँको उद्धेश्य हो ।’
नयाँ पार्टी गठनको लागि कम्तिमा एक महिनाको समयसीमा तय गरिएको भए पनि आवश्यक परे त्यस्तो समयलाई ६ महिनासम्म बढाउनुपर्ने भट्टराइले निकटस्थहरुसँग बताउने गरेका छन् ।
यसबाहेक, डा. भट्टराईले राजनीतिभन्दा बाहिर विभिन्न क्षेत्रका लोकप्रिय व्यक्तित्वहरुसँग पनि छलफल जारी राखेका छन् । रामेश्वर खनाल रवीन्द्र मिश्र, विजयकुमार, अनिल शाहलगायत व्यक्तिहरुसँग चरणवद्ध रुपमा छलफल चलाउँदै आएका छन् ।
स्रोतका अनुसार, ति व्यक्तिहरुले भट्टराईको पार्टीमा सक्रिय रुपमा नबस्ने तर बाहिरबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता दिएका छन् । विभिन्न एकेडेमिक क्षेत्र तथा कुटनीतिक क्षेत्रमा नियुक्तिको लागि भट्टराईले तिनै व्यक्तिहरुलाई प्रयोग गर्नसक्ने गरी छलफल चलाएको बुझिएको छ । यसअघि त कतिपयले बाबुराम आफू पार्टीको सल्लाहकार बस्ने र जनतामाझ लोकप्रिय छवि बनाएका निवर्तमान मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलको नेतृत्वमा पार्टी बनाउने चर्चा थियो ।
तर, यो तत्कालका लागि अगाडि बढाउन भट्टराईले नसकेको बताइन्छ । भट्टराईले नया“ पार्टी माक्र्सवादीभन्दा पनि डेमोक्र्याटिङ विशेषताको बनाउने बताइएको छ । यसअघि उनले एमाओवादी परित्याग गरेको घोषणा गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि यसको छनक दिएका थिए ।